Shina 4 oz Spice Glass Shaker miaraka amin'ny Labana Chalkboard ary orinasa sy mpamatsy akora stainless steel Hoyer
4 oz Spice Glass Shaker miaraka amin'ny Labana Chalkboard ary Stainless Steel Lid
Ity tavoahangy feno tavoahangy vera ity dia manome izay rehetra ilainao mba hikarakarana ny zava-manitra sy ny ananao ary hahay tsara ao amin'ny fitoeram-boalobokely, kabinetra ary drawers.
Ny fonon'ny vy vy, tsy ny hetaheta, mora manadio. Tohizo ny votoatinao mahamora ireo LSA fanamafisana matanjaka ireo. Tsy toy ny aluminium, ny vy, na ny kesika, ny anay dia vita amin'ny vy vy. Tsy mila manahy momba ny dents na dents - ny tampony amin'ny vy tsy asehony dia hamafa mora ny fahadiovana ary hitsangana isan'andro.
Haavo: 82mm / 3.23 santimetatra
savaivony: 45mm / 1,77 santimetatra
Fomba an-dakozia - aza mandany fotoana mitahiry zava-manitra ao anaty plastika mankaleo. Ity andiany fitaratra miloko fitaratra milamina sy mahafinaritra ity dia hampivoatra haingana ny fijery sy ny fahatsapana an-dakozia.
Multifunction sy multipurpose - tsy misy fetra amin'ireo karazana USES amin'ireny siny ireo. Azony atao mora ny manao fanomezana fety lehibe, tetikasa haingoana, fanamboarana trano, famatsiana birao, na fahatsaran'ny trano. Raha mitady fanomezana mahaliana sy misaina ianao, dia aza mandeha intsony. Ny faritra tsirairay dia rakotra tsara ao anaty boaty manintona tsara ho an'ny fanomezana.
Azo alaina ny takelaka fanamboarana - te hanao zavatra hafa amin'ny tavoahangy? Tsy olana, afatory fotsiny ny label PVC amin'ny alàlan'ny rano kely ary azonao soratana ao. Ny takelaka tsirairay dia misy ny marika boribory boribory sy marindrano, ka azonao atao ny mametraka satroka, fitaratra na roa! Ampiasao ireo marika sata mihidy mba hamantarana mora foana ny atiny tsirairay.
Ny tavoahangy manitra dia tsy ampiasaina any an-dakozia ihany, fa misy koa ny tanjona isan-karazany. Ampiasao izy ireo hitehirizana ny enti-miasa, vatomamy vita amin'ny homemamy, ary na dia ny mofomamy farany amin'ny zanakao aza. Fenoy zava-dehibe izy ireo ary ho tsara handro amin'ny fety na fety iray!
Mitondrà finaritra sy fomba maoderina
Amin'ireny siny goavam-be ireny dia tsy mila mandefitra amin'ny habaka sy ny fomba ianao. Voafehy tsara ny andaniny, mamonjy toerana ao anaty birao na kabinetra izy ireo ary mijery tsara. Tsy isalasalana, hanangona ny lakozia amin'ny fomba maro ry zareo!
Size Boky: 100 ml Haavony: 8,2 cm Diameter: 4,5 cm Boky: 3,5 oz Haavony: 3.23 santimetatra Diameter: 1,77 santimetatra
Previous: Milina fanosorana sira sy voasarimakirana
Manaraka: Kobalt manga 16 oz Boston boribory boribory ary manosika voatavo voatavo voatavo ambony
sakafo fanaovana sakafo sira sy dipoavatra
napetraka ny vinaingitra dipoavatra misy sira
tavoahangy dispenser vinaingitra